अफशोर बैंकिंग - तपाइँको लागि उत्तम खाता कसरी खोल्ने
अफशोर बैंकि Guide गाइड उत्तम खाता कसरी खोल्ने
अपतटीय बैंकिंग एक बस्ने जो देश बाहिर बैंक खाता खोल्नु पर्छ। व्यक्ति विभिन्न कारणका लागि यी खाताहरू खोल्दछ। यसले मुद्दाहरू, लेनदारहरू र निर्णयहरूबाट उनीहरूको सम्पत्तिको रक्षा गर्नुका साथै कर बचत र व्यापार विस्तार समावेश गर्दछ। हामी लगातार यो लेख अपडेट गर्दछौं। हाम्रो अभिप्राय तपाईलाई उत्तम मार्गनिर्देशन दिनुहुन्छ कसरी छलफल गर्ने, कहाँ र किन गर्ने एक अपतटीय बैंक खाता खोल्नुहोस्। हामी कानून, परिभाषा र अर्थ छलफल गर्दछौं। हामी आधारभूत मा उन्नत जानकारी समीक्षा गर्नेछौं नि: शुल्क अनलाइन पुस्तक तपाईं तल देख्नुहुनेछ।
पश्चिमी संसारमा बैंकिंग सेवाहरू निराशाजनक अवस्थामा छन्। यो तथ्य हो।
यहाँ के छ Global Finance भन्छन्, २०२१ मा यस लेखको रूपमा, विश्वका sa० सुरक्षित बैंकहरू:
कुनै पनि विश्वमा sa० सुरक्षित बैंकहरू मध्येको कुनै पनि संयुक्त राज्य अमेरिका मा स्थित छन्। शून्य
शीर्ष 50० सुरक्षित बैंकहरू मध्ये, केवल पाँच ती मध्येका अमेरिकामा अवस्थित छन्।
यसबाहेक, सूचीमा पाँच अमेरिकी बैंकहरू मध्ये चार केवल साना क्षेत्रीय फार्मिंग बैंकहरू हुन्।
सूचीमा एक मात्र राष्ट्रिय अमेरिकी बैंक 50० को बाहिर th० औं स्थानमा छ (अन्तिम स्थान)।
त्यहाँ छ AAA मूल्या .्कन गरिएको छ अपतटीय बैंकहरु.
छ AAA मूल्या rated्कन गरिएको बैंकहरू मध्ये, कुनै पनि अमेरिका मा स्थित छन्।
अफशोर बैंकिंग: एक विस्तृत गाइड।
संयुक्त राज्य अमेरिका: inण मा गहिरो
यसकाे बारेमा साेच। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व मा सब भन्दा inण भएको देश हो। कुनै अन्य देश नजिक आउँदैन। सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय burdenण बोझ भएका चार देशहरूमध्ये अमेरिकाका दुई नम्बर बेलायतको twiceण छ भने तीन नम्बरको तुलनामा साढे तीन गुणा बढी छ र चार फ्रान्स र जर्मनी।
स्रोत: भिजुअलको सौजन्य पूंजीवादी
त्यसो भए, माथिको उद्घाटन कथन केहि ध्यान केन्द्रित हुने हेडलाईन होईन। यो ठोस प्रमाणको आधारमा शुद्ध तथ्य हो। यसबाहेक, अमेरिकाले यसको क्रेडिट रेटिंग विश्वको सबैभन्दा सम्मानित कर्पोरेट र सरकारी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी स्ट्यान्डर्ड एन्ड पुअरको डाउनग्रेड गरेको थियो। अमेरिकी व्यक्तिहरूको आफन्त देशमा अफशोर बैंकिंगमा प्रतिबन्ध लगाउन कानूनहरू छैन। त्यसो भए, सुरू गर्न वा थप जानकारीको लागि स्वतन्त्र महसुस गर्न परामर्श फारम प्रयोग गर्न वा यस पृष्ठमा नम्बरहरू कल गर्न प्रयोग गर्नुहोस्। यस बीच कृपया तलको गाइड हेर्नुहोस्.
नयाँ अपतटीय खाताहरु? तपाईको समझलाई ब्रश गर्नु पर्छ? विदेशमा खाता खोल्न चाहनुहुन्छ? तलको गाईड ट्यूटोरियल हो। यसले दुबैलाई सुरूवात गर्न र तपाइँको ज्ञानलाई बलियो बनाउन विस्तृत जानकारी प्रदान गर्दछ।
अफशोर बैंकिंग गाइड र नि: शुल्क पुस्तक
अध्याय 1: अफशोर बैंक खाता: यो के हो? किन एक छ?
- विस्तृत जानकारी, सुझावहरू र कसरी गर्ने
अध्याय 2: यो Best उत्तम कारणहरू एक अपतटीय बैंक खाता खोल्नको लागि - यो उमाल्ने
अध्याय 3:अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिंग जानकारी
अध्याय 4: मिथक
अध्याय 5: सुरक्षा र सुरक्षा
अध्याय 6: सम्पत्ति संरक्षण
अध्याय 7: Best सर्वश्रेष्ठ देशहरू- क्षेत्राधिकारको एक अफशोर बैंक सूची
अध्याय 8: अफशोर खाता सेटअप - के गर्ने
अध्याय 9: क्रेडिट कार्ड व्यापारी खाताहरू
अध्याय 10: लागत
अध्याय 11: सिफारिस गरिएको क्षेत्राधिकार
अध्याय 12: स्विस बैंकिंग
बोनस अध्याय: Bitcoin र अन्य क्रिप्टोकरन्सी
अमेरिकी बैंकि Pro समस्याहरू
युनाइटेड स्टेट्स बैंकि more प्रणालीमा अझ नजिकबाट ध्यान केन्द्रित गरौं।
युएस बैंक असफलता, २००० बाट २०२० र २०२० अनुमान
अमेरिकाका केही पहिलेका बैंकि st स्टलवार्टहरूले बैंकिंग सुरक्षाको मापदण्डहरू मापन गर्दैनन्। बैंक अफ अमेरिका कर्पोरेसन, उदाहरणका लागि, हालसालै यो सूचित गरिएको थियो कि यसले तनाव परीक्षा पास गरेन। यो परीक्षणले निष्कर्षमा पुगेको छ कि बैंकले more$..33.9 अर्ब डलर बराबरको बचत गरेको थियो भने उनीहरूले अरु दुई वर्षको आर्थिक कठिनाइलाई सँभाल्न आवश्यक पर्ने भण्डारको मात्रा घटाए।
एजेन्सी कि अमेरिकी बैंकहरु लाई बीमा गर्न मानिन्छ, एफडीआईसी नै, छोटो छ। अमेरिकी बैंकि system प्रणालीको बिमा गर्न कानूनले यसलाई लिन आवश्यक पर्ने पैसाको मात्रा उनीहरूसँग हुँदैन।
यसबाहेक, अमेरिकी संघीय रिजर्व पातलो बरफमा स्केटिंग गर्दैछ। पूंजी अनुपात यो एक palry १.२1.24% छ। यसकाे बारेमा साेच। लेल्म्यान ब्रदर्स 3% मा थियो जब यो बैंकरप्लेसनको लागि फाइल गर्‍यो।
हालसालै गरिएको एक आकलनमा त्यहाँ $०..50.7 ट्रिलियन डलर USण थियो जुन अमेरिकी घरपरिवार, व्यवसाय र सरकारहरूले .ण लिएका थिए। यो एक आश्चर्यजनक represents. times गुणा सम्पूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका को कुल वार्षिक कुल घरेलू उत्पादन प्रतिनिधित्व गर्दछ।
समस्यामा बैंकिंग प्रणाली
यसैले यो स्पष्ट छ कि अमेरिकाले अत्यन्त कम्तिमा पूंजीवाजी बैंकिंग प्रणाली पाएको छ, जसलाई थोरै कोषबाट प्राप्त रकम बिमा संस्थाले समर्थन गरेको छ। त्यसोभए, हामीले सोध्नु हुँदैन, "अफशोर बैंकिंग सुरक्षित छ?" यसको सट्टामा हामीले सोध्नु पर्छ, "के यु एस बैंकि safe्ग सुरक्षित छ?"
हामी फेरि स्पष्टसँग देख्न सक्छौं कि यो केवल हाइपरबोल मात्र होइन। यो तथ्य पछि तथ्यमा आधारित ठोस सत्य हो। वास्तवमा, यो पेटको खाडलमा एउटा चट्टान जस्तो बसिरहेको छ कि एक आश्चर्यजनक अप्ठ्यारो अनुभूति हो।
के हामी धोकामा छौं?
हामीले हाम्रा अभिभावकहरू बैंकमा जाँदा देख्यौं, उनीहरूले कडा कमाएको पैसा बैंकमा जम्मा गरे, विश्वास गर्ने बैंकहरू सुरक्षित थिए। अवश्य पनि यो सुरक्षित छ, हामी सोच्न सक्छौं। यो एक बैंक हो, जे भए पनि।
यद्यपि एफडीआईसी वेबसाइटको तथ्या at्कलाई हेरेर, २००० देखि २०१ beginning को सुरुसम्म US 2000 अमेरिकी बैंक असफल भए। हो, 2021 562। ध्यान दिनुहोस् कि FDIC ले सम्पूर्ण खाता ब्यालेन्सको लागि निक्षेपकर्ताहरूलाई बीमा गर्दैन। तिनीहरूले केवल पहिलो $ २,562,००० लाई कभर गर्छन्। त्यस रकम भन्दा माथि केहि पनि पातलो हावामा "poof" जान सक्छ जब तपाइँको बैंक असफल हुन्छ।
वाशिंगटन म्युचुअल बैंकको लागि विपत्तिमा अन्त्य भएको विपत्तिजनक घटनाहरू सम्झनुहुन्छ? यो थियो अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा ठूलो बैंक असफलता। एक दिन जम्मा गर्नेहरूले सबै ठीकठाक ठाने। भोलिपल्ट बिहान, तिनीहरू उठे र थाहा पाए कि उनीहरूको बैंक अब छैन।
यो आजको तरिका हो। यो हामीमा सानो उमेरमा रोपिएको विश्वासको विपरित हुन सक्छ। तर हामी सबै नयाँ वास्तविकता को लागी जगाउन आवश्यक छ।
स्पष्ट तथ्यले अफशोर बैंकिंग गर्न अग्रसर गर्दछ
जब यी स्पष्ट तथ्यांकहरूको सामना गर्नुपर्दा यसले हामीलाई नयाँ रिजोलुसनमा संकुचित गर्दछ। जब सबै प्रमुख वित्तीय संस्था सीमांत बेसहारा छन्, जब तथ्यात्मक पुष्टिहरूले यस सत्यलाई प्रकाश दिन्छ। के तपाईं आफ्नो कम्तिमा प्रतिशत कोषहरू विदेशमा सुरक्षित क्लाइमहरूमा राख्नु बुद्धिमानी ठान्नुहुन्न?
म पक्कै सोच्दछु। म तपाईंलाई आग्रह गर्दछु कि चाँडो भन्दा चाँडो एक अन्तर्राष्ट्रिय खाता सेट अप गर्न को लागी कदम चाल्न। प्रयोग गर्नुहोस् फोन नम्बर or फारम भर्नुहोस् यस पृष्ठमा। हामीले हजारौंलाई उनीहरूको अफशोर बैंकि needs आवश्यकताका साथ सहयोग गरेका छौं। यसबाहेक, हामी मानिसहरूलाई १ 1906 ०। देखि उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित राख्न मद्दत गर्दैछौं।
क्षेत्राधिकार छनौट कसरी गर्ने
शान्तिमय सरकारहरू र लामो समयदेखि वित्तीय सेवा उद्योगहरूको साथ राम्रो वित्तीय स्थितिमा न्याय क्षेत्रहरू विचार गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। जनता र विधायिकाले के गर्छन् भन्ने भन्दा उनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसोभए, यदि तिनीहरूसँग वित्तीय स्थिरताको लागि प्रतिष्ठा छ भने, यसले तपाईंको वित्तीय हेवन छान्नेमा लामो यात्रा गर्छ।
यो वास्तवमै के हो?
यो कुरा मनमा राख्नुहोस् कि तपाइँको पैसा अफशोर सुरक्षित गर्नु केमेन टापु वा ह Hongक Kong जस्ता कर आश्रयस्थलहरूमा कर दायित्व लुक्नको बारेमा होइन। यो सम्पत्तिहरूको विविधीकरणको बारेमा हो। को अमेरिकी सरकार, उदाहरणका लागि, वास्तवमै ख्याल राख्दैन यदि तपाईंसँग फण्ड अफशोर छ भने जब सम्म तपाईं आफ्नो आय रिपोर्ट। पैसा अफशोरमा राख्दै, ठूलो र ठूलो, कर तटस्थ घटना हो। त्यसो भए यसले सामान्य रूपमा तपाईंको करहरू बढाउँदैन वा घटाउँदैन। लाखौं नागरिकहरूको अपतटीय खाताहरू छन् र यसले एउटा रेड फ्ल्याग फ्याँक्दैन यदि तपाईंसँग पनि छ भने कर अधिकारीहरूलाई।
को आगमन संगै अनलाइन बैंकि, अनलाइन वायरिंग क्षमता, टेलिफोन बैंकिंग र डेबिट कार्डहरू, बैंकिंग अफशोर सडकमा बैंकिंग भन्दा यति धेरै फरक छैन। साथै, यो ब्याक दरहरू प्रस्ताव गर्दछ कि ब्या rates्कर दरहरू प्रस्ताव गर्दछ जुन प्रायजसो धेरै बढी, स्थानीय बैंकहरूले तिर्ने ब्यापारहरू भेट्टाउनु सामान्य कुरा हो।
यसकाे बारेमा साेच। अन्य देशहरूको तुलनामा अमेरिकामा ज्याला धेरै छ। Rईल एस्टेट मूल्यहरू उच्च छन्। करहरू उच्च छन्। कर्मचारी चिकित्सा बीमा छत मार्फत हुन्छ। ती खर्चहरू अमेरिका, बेलायत, क्यानडा ए मा एक बैंक को नाफा को एक ठूलो हिस्सा लिन्छd अन्य उच्च-मूल्यवान देशहरू। यदि अफशोर बैंकको खर्च कम छ, तपाइँ, तिनिहरु लाई तिर्नको लागि अरु धेरै बाँकी रहनेछ।
किन अमेरिकी बैंकहरू तथ्यहरू लुकाउँछन्
तपाइँको स्थानीय बैंक स्पष्ट एक टिभी विज्ञापन लिन को लागी जाँदै छ कि तपाइँ एक धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भनेर ब्याज राम्रो दर अपतटीय। विदेशी बै ,्कहरू, घरेलु बैंकि lic लाइसेन्स बिना, कानूनी रूपमा स्थानीय रूपमा विज्ञापन गर्न सक्दैनन्। त्यसो भए तपाईलाई कसरी थाहा हुन्छ? उनीहरूले तपाईंलाई त्यो बताउन गइरहेका छैनन् अफशोर बैंकहरू बलियो छन् सडक भन्दा तलको बैंक भन्दा
सब भन्दा बलियो अफशोर बैंकहरू
स्विजरल्याण्ड, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, ह Hongक Kong र अन्य धेरै देशहरूमा धेरै धेरै कडा र सुरक्षित बैंकहरू छन्। तपाईको साँच्चिकै भित्रि स्कूप छ, जुन दशकौंको अनुभवमा आधारित छ अफशोर बैंकिंग केन्द्रहरू विदेशीहरूको लागि खाता खोल्नेछ, वृद्धि लगानी प्रस्ताव गर्दछ, आर्थिक लचिलो छन्, सुविधाजनक सेवाहरू छन्, र वास्तवमै यसका साथ काम गर्न पाउँदा रमाईलो छ।
यो तपाईंको पैसा हो - मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्
खाता अपतटीला सेटअप गर्ने अनुभव भएको कसैको मार्गदर्शन लिनको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि बैंकले आफूलाई महान हेर्न सक्दछ। तर केवल अनुभव संग कोही - र हामीले हजारौं स्थापित गरेका छौं खाताहरू अफशोर - कुन व्यक्तिले वास्तवमा उनीहरूको भण्डारकर्तालाई सही व्यवहार गर्ने कुरा बताउन सक्छ। सबै पछि, हामी यहाँ तपाईंको पैसाको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं। निश्चित, यो एक सानो लागत लाग्न सक्छ। सायद तपाईले सोचे भन्दा धेरै कम। तर यो गलत बैंक छनौटको विनाशकारी विकल्प भन्दा राम्रो छ।
अफशोर बैंक खाता सल्लाहहरू
अफशोर बैंक खाता प्रदायकहरूले ओनशोरमा कानूनी रूपमा विज्ञापन गर्न सक्दैनन्। यस बाहेक, घरेलु बैंकहरू ठूला राजनीतिक दाता हुन्। यसैले, त्यहाँ जानकारी को अभाव र बारे मा प्रसारित डाउनराइट गलत जानकारी को एक संयोजन छ अफशोर खाता। नतिजाको रूपमा, केहि मानिसहरुमा गलत धारणा छ कि यो अवैध छ - यो पक्कै त्यस्तो होइन। कसैलाई लाग्छ कि यो कर हटाउने एक तरीका हो - यो छैन। कसै-कसैको विचारमा अपराधीहरूले यसलाई बृहत रूपमा प्रयोग गर्छन् - यो अत्यन्त विरलै छ किनभने बैंकले अशुद्ध पैसा ग्रहण गर्ने अनुमतिलाई गुमाउन सक्छ।
सत्य यो हो, यदि तपाईं अमेरिका वा हुनुहुन्छ UKउदाहरण को लागी, जब सम्म तपाइँ तपाइँको विश्वव्यापी आय रिपोर्ट, सरकार कम ध्यान गर्न सक्छ। विचार गर्नुहोस् कि त्यहाँ प्रत्येक वर्ष हाम्रो सिमाना भरि खरबौं डलर उडिरहेका छन्। यसैले, तपाईंको खाताले संघीय रडारमा एक लहर बनाउँदैन।
त्यहाँ अपतटीय बैंक खाता खोज्ने कसैको लागि केहि अद्भुत विकल्पहरू छन्। त्यहाँ छन् अफशोर बैंक कि मा विशेषज्ञ सम्पत्ति संरक्षण मुद्दा मुद्दा बाट। अन्य बै्कहरूले उनीहरूलाई पूरा गर्छन् जसलाई उच्च-मात्रा ब्यापार लेनदेन खाताहरू चाहिन्छ। अरुहरु मा विशेषज्ञ पैसा व्यवस्थापन लगानीकर्ताहरूको लागि। त्यहाँ पनि बैंकहरू अफशोर छन् कम लागत अनलाइन शेयर ट्रेडिंग यो आफैलाई व्यापारीहरूको लागि। केहीलाई न्यूनतम निक्षेपहरू चाहिन्छ, जस्तै $ २००० अमेरिकी डलर। अरूले उच्च नेट वर्थ व्यक्तिको पूरा गर्छन र significant २ when,००० अमेरिकी वा सो भन्दा बढीको बैंक खाता खोल्दा महत्वपूर्ण निक्षेपहरू आवश्यक पर्दछ।
केहीले कम लागत संरचनाहरूको कारण, स्वदेशी बैंकहरूको तुलनामा उच्च ब्याज दरहरू तिर्छन्। अरूले घरेलु बजारसँग तुलनात्मक दरहरू तिर्छन्। केहि अफशोर क्षेत्राधिकारहरू, जस्तै कुक टापुहरू, विदेशी न्यायलाई मान्यता दिदैनन्। त्यसोभए, जब एक अपतटीय ट्रस्टको साथ संयुक्त हुन्छ, तिनीहरू सम्पत्ति सुरक्षा खोज्नेहरूलाई पूरा गर्दछन्।
सेट अप गर्दा विदेशी बैंक खाताहरू, परिश्रमका कारण र ज्ञात तपाईंको ग्राहक नियमहरू सार्वभौमिक हुन्। ती बैंकि systems प्रणाली जसले विदेशी बैंक खाताहरूलाई अनुमति दिन्छन् विदेशीहरूलाई स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा लिईन्छ जुन उनीहरू आफ्नै देशबाट कर चोरीको खोजीमा छन्। तपाइँको कोष को स्रोत कानूनी छ भनेर निश्चित गर्न तिनिहरु तपाइँको आवेदन को छानबीन गर्नेछ। यसैले, यदि तपाईं एक अफशोर बैंक खाता खोल्न चाहनुहुन्छ भने, तयार हुनुहोस्। उनीहरूले तपाइँलाई तपाइँको पहिचानको पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान गर्न आवश्यक गर्दछ र तपाइँको निक्षेप कहाँबाट आयो।
अफशोर बैंकिंग रिमोटली इन्टरनेट मार्फत
सबै बैंकहरूलाई तपाइँले उचित पहिचान प्रदान गर्न आवश्यक गर्दछ। केही बैंकहरूले तपाईंलाई पत्र मार्फत कागजात उपलब्ध गराउँदछ। अरूलाई तपाईले व्यक्तिगत रूपमा देखाउन आवश्यक हुन्छ। विश्वव्यापी बहु बैंकहरु संग हाम्रो सम्बन्ध को कारण, हामी एक "योग्य परिचयकर्ता"ताकि हामी सक्षम छौं खाताहरू खोल्नुहोस् टाढा ग्राहकहरूको लागि जहाँ मानिसहरू त्यसो गर्न सक्दैनन्। यसबाहेक, अपतटीय बैंकहरूको विशाल बहुमतले अमेरिकी वा क्यानेडाली जनताका लागि खाता खोल्दैन। हामीलाई थाहा छ कि खोल्नेछ विदेशीहरूको लागि खाता, र यात्रा को आवश्यकता बिना। यस पृष्ठमा फारम वा माथीको संख्या प्रयोग गरेर बैंकि off अपतटीय बारेमा प्रश्नहरूको थप जवाफहरू प्राप्त गर्नुहोस्।